Masiraidhi Martech Zone
Masiraidhi: Kubatana Dhizaini, Mushandisi Yekushongedza Dhizaini, YeMushandisi Chiitiko Dhizaini
NeChishanu, Gumiguru 4, 2013 China, Gumiguru 3, 2013 Douglas Karr
Ini ndanga ndichitarisa chaiyo inotonhorera yakavhurwa sosi chirongwa nhasi manheru inonzi slide kwaunogona kusona mapeji eHTML neCSS pamwe chete muchiitiko chemasiraidhi chinoshanda muchinjikwa chikuva. Ivo vanoshanda pane nharembozha uye piritsi zvigadzirwa (kunyangwe inotsigira yekubata skrini uye yakazara skrini). Uye iwo masiraidhi anochengeterwa pamhepo asi anogona kuratidzwa kunze kwenyika zvakare! Ivo zvakare vanoenderana neDropbox uye vanogona kugoverwa sezvandiri kuita pazasi!
Iyi yakanaka, yakapfupika slide na Jamie Cavanaugh iyo inotsanangura musiyano uripo pakati pekudyidzana Dhizaini (IxD), Mushandisi Wemukati Dhizaini (UI) uye YeMushandisi Chiitiko Dhizaini (UX). Kufananidza kwezviyo, mbiya uye chipunu kubva Ed Lea ane njere.
Tags: Interaction DesignixdslideuiUser Experience Designmushandisi interface dhizainiux
Uchapupu Huchinongedzera kuKubatana Pakati peSERP Chinzvimbo uye Webhu inomiririra
Nei Medium.com Yakakosha kune Yako Yekutengesa Strategic
Gumiguru 4, 2013 na1: 15 PM
Exclusive post, Ndatenda